यस्तो परिवेशमा लकडाउन कसरी खोल्ने ? चर्चा थुप्रै भएका छन् । सुनिँदै छ लकडाउन खोल्ने विभिन्न तरिकासहितका सुझावहरु पेस भएका छन् उच्चस्तरीय समितिमा । कतिले पत्रपत्रिकामार्फत सरकारलाई लकडाउन खोल्ने आइडिया फोकटमै पनि दिएका छन् । लकडाउन खुलेका देशहरुमा गरिएको प्रयोग उदाहरणका रुपमा सुझाएका छन् थुप्रैले । तरिकाहरु अनेक छन् । तीमध्ये हाम्रो समाज र व्यवहार सुहाउँदो तरिका कुन हो त ? हठात् लकडाउन खोल्नु महामारीलाई अँगालो हाल्नुबराबर हुने निश्चित छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १५:३७
हो, लाखौं मानिस मर्ने संकेत देखिईसकेको छ । करोडौं संक्रमित हुनसक्ने सम्भावना बढ्दैछ । मानिस मानिसबीच कोरोनाको आशंकाको प्रतिशत बढ्दै जानुले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई भने पक्कै असर गर्नेछ । सामाजिक मूल्यमान्यतामा असर परेपछिको विश्व भने अवश्य फरक हुनेछ ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ २०:३६